Ity no base diagnostika tsy misy tariby an'ny Apple Watch Series 7 | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 16/10/2021 16:43 | Apple Watch, About us
Andro vitsy lasa izay dia nilaza taminay izahay fa ny singa voalohany amin'ny Apple Watch Series 7 dia tonga tamin'ny haino aman-jery. Ary ny sasany mpampiasarehefa nojerena lalina izy ireo dia takatr'izy ireo ny fanesorana ny seranan-tsambo diagnostika ara-batana amin'ny fiambenana Apple vaovao. Fa kosa, ny aretina hita ao amin'ny Apple Stores ara-batana dia hatao amin'ny alàlan'ny a fototra diagnostika vaovao tsy misy tariby izay niasa tamin'ny refin'ny 60.5 GHz. Ankehitriny hitantsika izao ny sary voalohany amin'ity toby ity, tafaporitsaka tamin'ny alàlan'ny maso ivoho serasera Breziliana.
Apple dia mampiasa base diagnostika tsy misy tariby ho fanohanana
Ny fototra diagnostika vaovao ho an'ny Apple Watch Series 7 vaovao dia nantsoina hoe maodely A2687. Hatramin'izao, Big Apple watches dia nanafina seranana fanohanana izay mifandray amin'ny rafitra Apple ao amin'ny magazay ara-batana. Amin'ity fifandraisana ity dia azonao atao ny mamerina mamerina ilay fitaovana, mametaka indray ny watchOS, ary mamakafaka ara-teknika izay mety hitranga amin'ilay fitaovana.
El Apple Watch Series 7 mijanona amin'ny fampidirana an'ity seranana ara-batana ity manamboatra lalana a famindrana data tsy misy tariby. Ity famindrana ity dia natao tamin'ny alàlan'ity fotony famahanana tsy misy tariby ity izay resahintsika. Ampiasaina amin'ny asa anatiny fotsiny izy io ary miasa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny 60,5 GHz matetika. Ny singa dia manana singa roa araka ny ahitanao ny sary izay mitarika ny lahatsoratra. Navoaka an-tsokosoko ireo sary ireo Anatel, orinasam-pifandraisan-davitra any Brezila.
Ny tapany ambany dia mitondra ny base charge miaraka amin'ny charger magnetika sy port USB-C izay hifandray amin'ny rafitry ny Big Apple. Etsy ankilany, ny tapany ambony dia mamela ny fihazonana ho voatazona sy raikitra. Ny fifandraisana misy eo amin'ny fototra andriamby sy ny fononteny dia mamela manao karazana diagnostika teknika isan-karazany amin'ny tontolo azo antoka amin'ny alàlan'ny rafitra noforonin'i Apple, toy ny fivarotana ara-batana na antoko fahatelo nahazo alàlana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ity no base diagnostika tsy misy tariby an'ny Apple Watch Series 7